लन्डनमा गायक केसीले फेसबुकमा ‘गुडबाई’ लेखेर गरे आत्महत्या। - Malayakhabar
होम पेज प्रवास विशेष लन्डनमा गायक केसीले फेसबुकमा ‘गुडबाई’ लेखेर गरे आत्महत्या।
लन्डनमा गायक केसीले फेसबुकमा ‘गुडबाई’ लेखेर गरे आत्महत्या।
[ ध्रुवराज अर्याल/अन्नपूर्ण ]
लण्डन (बेलायत):= झण्डै डेढ दशकअघिदेखी अध्ययनका लागि बेलायतको लण्डन बस्दै आएका नेपालमा पोखरा घर भएका गायक , कलाकार बद्री केसीले लन्डनमै आत्महत्या गरेका छन्।
आफ्ना साथी, परिवार र संसारलाई ‘गुडबाई’ भन्दै शुक्रबार दिउँसो फेसबुकमा स्टाटस लेखेका ३२ वर्षीय केसीको शव लण्डनको एजवेरस्थित उनी आफैले काम गर्ने स्कुल हातामा रहेको रुखमा शनिबार बिहान झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको थियो।
केसीका सहकर्मी राम थपलियाका अनुसार उनको निराश फेसबुक स्टाटस देखेपछि शुक्रबार दिउँसोदेखि नै सहकर्मीले खोजी शुरु गरेका थिए। उनको फोनसमेत नउठेपछि प्रहरीलाई पनि खबर गरिएको थियो। प्रहरीले शुक्रबार अबेरसम्म खोज्दापनि नभेटिएका उनको शव शनिबार मात्रै फेला परेको थियो।
लण्डनको एजवेरस्थित मिल हिल स्कुलमा क्याटरिंग सुपरभाइजरको रुपमा कार्यरत केसी बेलायतका नेपालीमाझ लोकदोहोरी गायकका रुपमा चिनिन्थे।
गाउन र नाँच्न दुवैमा सीपालु उनले यहाँको निरमाया रोधीघरमा झण्डै पाँचवर्षसम्म लोकदोहोरी गायकका रुपमा काम गरेका थिए। बेलायतका कयौं ठाउँमा आयोजना हुने कार्यक्रममा समेत उनले प्रस्तुति दिने गरेका थिए।
अघिल्लो लेख इन्डोनेसियाको जाकार्ताबाट उडेको विमान समुन्द्रमा खस्यो !
पछिल्लो लेख संसद बिघटनको बिरुद्धमा नेपाली कांग्रेस बारा क्षेत्र न. २ को बिरोध सभा सम्पन्न।